नेप्सेमा सिटिजन्स बैंकको सेयरमूल्य समायोजन, समायोजन पछिको भाउ कति ? - Arthasansar
नेप्सेमा सिटिजन्स बैंकको सेयरमूल्य समायोजन, समायोजन पछिको भाउ कति ?
शुक्रबार, २२ असोज २०७८, ०७ : ११ मा प्रकाशित
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा सिटिजन्स बैंक लिमिटेडको सेयरमूल्य समायोजन भएको छ ।
बैंकको १२.९१३ प्रतिशत बोनस सेयर पछि नेप्सेले प्रतिकित्ता ३ सय ५२ रूपैयाँ कायम हुने गरी सेयरमूल्य समायोजन गरेको हो । नेप्सेले बुधबार अन्तिम कारोबार मूल्य ३ सय ९८ रुपैयाँका आधारमा मूल्य समायोजन गरेको हो । आईतबार कम्पनीको कारोबार यहि समायोजित मूल्यमा नै खुल्नेछ ।
बैंककले साधारण सभा तथा लाभांश वितरण गर्ने प्रयोजनका लागि आज असोज २२ गते एक दिन बुकक्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । असोज २१ गते सार्वजनिक बिदा परेको हुनाले असोज २० गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा कारोबार भई कायम हुने शेयरधनीहरूले मात्र लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
बैंकको असोज ८ गते, शुक्रबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को सञ्चित मुनाफाबाट बैंकका शेयरधनीहरूलाई चुक्ता पूँजीको १२.९१३ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ३.०८७ प्रतिशत नगद गरी कुल १६ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ ।